अमेरिकी नौसेना दिग्गजहरूका लागि एक सामाजिक नेटवर्क! | Martech Zone
अमेरिकी नौसेना दिग्गजहरूका लागि एक सामाजिक नेटवर्क!
केहि वर्ष अघि मैले डोमेन खरीद गरें NavyVets.com। मसँग वास्तवमै साइट निर्माण गर्ने कार्यमा मसँग समय थिएन, त्यसैले मैले डोमेनमा राखें Sedo.com यसमा कुनै चासो छ कि छैन भनेर हेर्न र विज्ञापन डलरको अलिकति प्राप्त गर्न। सानो साधारणतया केहि मतलब छैन ... हजारौं हिटहरूका लागि हरेक महिना, म शायद यहाँ र त्यहाँ मात्र एक पैसा प्राप्त गर्दै थिए।
बढ्दो सामाजिक नेटवर्कको साथ, मैले साइटमा स्थापना गर्न सक्ने विभिन्न सामाजिक नेटवर्कि packages प्याकेजहरू परीक्षण गर्न थाले। मैले लोड गरें एल्ग तर यो अनुकूलन गर्न र काम गर्न सजिलो प्याकेज थिएन।
त्यस समयको बारेमा, मैले साइटको लागि लोगोमा काम गर्न शुरू गरें। मैले मूल रूपमा यूएसएन प्रतीक लिएँ र, इलस्ट्रेटरको प्रयोग गरेर, सबै तहहरू अलग गरें र केही आयाम थपें।
केहि दिन अघि, मैले एक झलक हेर्न शुरू गरें Ning। केही वर्ष पहिले मैले पहिलो पटक देखेको पहिलो पटक पहिलो थियो म्यासअप क्याम्प। यो एकदम चाखलाग्दो थियो ... सफ्टवेयरले तपाईंलाई उनीहरूको प्लेटफर्मको शीर्षमा कस्टम कोड लेख्न अनुमति दिएको थियो… वास्तवमै प्लगइन होईन, तर अझ बढी बलियो।
Ning बाकसको ठीक बाहिर खोल्न सजीलो एक शानदार सामाजिक नेटवर्क निर्माण गरेको छ! वास्तवमा, यो लोगो निर्माण गर्न मलाई धेरै समय लाग्यो यसले सामाजिक नेटवर्कलाई चालु गर्न र चलाउनको लागि भन्दा बढी लगायो!
मैले केहि प्रिमियर अला कार्टे विकल्पहरूको लागि अप्ट इन गरें - निजी डोमेन, मेरो आफ्नै विज्ञापन, र सबै नि B ब्लिंगको हटाउने। मलाई लाग्छ यो राम्रो देखिन्छ! अब मलाई रुचि भएको केहि अरु Vets खोज्नु पर्छ! मलाई लाग्छ कि यो सुन्दर कथा हो - क नेवी वेटरन सोशल नेटवर्क... एक नौसेना अनुभवी द्वारा स्वामित्व र संचालित!
भिडियो: Colts.com सही प्रायोजकहरूको लागि भिडियो विज्ञापन गर्दछ!
१० दिन बाँकी: तपाईंको $ १,००० जित्ने मौका %०% हो!
नोभेम्बर २०, २००। 15::2007 अपराह्न
डग, राम्रो जानकारी, मलाई केही मान्छेहरू थाहा छन् जुन केहि साना सामाजिक नेटवर्कहरू गरिरहेछन् र उनीहरूसँग तपाईंको पोष्ट साझा गर्दछन्!
मलाई प्रयोग गर्न कत्ति सजिलो भएकोमा म छक्क परें, JD मलाई लाग्छ लेआउटले केहि थप मद्दत प्रयोग गर्न सक्छ, तर यो त्यहाँ पुग्नेछ!
यो साइट आज रात पहिलो पंजीकरण भयो! ओहो!
तपाईले डोमेनसँग केहि शुरू गर्नु भएको देखेर खुसी भयो (त्यस्तो उत्कृष्ट डोमेन!)। म एक छोटो समयको लागि इंडिल्यान्ससँग निंग प्रयोग गर्दैछु र यो अहिले सम्म एकदम राम्रो भएको छ। मैले कुनै उन्नत सुविधाहरूको साथ धेरै गडबड गरेको छैन, तर होस्ट गरिएको, नि: शुल्क सेवामा तपाईंको कोडमा केहि देख्न सक्षम हुनु दुर्लभ छ।
मैले निing एपीआई वा गुगलको खुला सामाजिक साथ सम्भावनाहरू हेर्न समय पाएको छैन। अह, मेरो कहिल्यै अन्त नगर्ने सूची।
हामीसँग निश्चित रूपमा नोट साझा गर्नुहोस्, नूह। म तपाईंसँग छु - मेरो सूची कार्यहरू पूर्ण गर्ने मेरो क्षमता भन्दा धेरै लामो छ!
राम्रो दयालु मानिस, के तिमी कहिल्यै सुत्छौ?
अझै अर्को निफ्टी, डग-मिस्टरबाट सार्थक परियोजना। यसका साथ शुभकामना!
म वास्तवमा आज दिनको प्राय: दुर्घटनामा परेको थिएँ - मेरो घाँटी खराब छ। यो पहिलो संकेत हो कि म धेरै घण्टा काम गर्दैछु। म आज राती राम्रो रातको निद्रा लिने छु र बिहानै यसमा फर्कनेछु!
ठूलो गूंगा बजार
नोभेम्बर २०, २००। 16::2007 अपराह्न
यो साँच्चिकै राम्रो छ। मँ सामाजिक नेटवर्कि sites साइटहरु को लागी एक भन्दा बढि विचारहरु छन्, र नि of को लागी सुनेको छ तर म अझै यो परीक्षण बाहिर छ। मलाई लाग्न सक्छ म आशा गर्दछु कि यसले तपाइँको लागि रोक्न शुरू गर्दछ।
वाह! धेरै तीब्र साइट! मैले निingको बारेमा सुनेका थिए तर मलाई थाहा थिएन कि यो कति शक्तिशाली छ। म निश्चित रूपमा यसमा हेर्नेछु। धन्यवाद!
नोभेम्बर,, २०१ at 19::2007 बिहान
माफ गर्नुहोस्, तपाईले सुन्नुभयो कि एल्गमा तपाईले समस्या भोग्नु भएको थियो, तपाईलाइ जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाई कहाँ सेट अप गर्न गाह्रो भयो। चीजहरू एल्गको साथ द्रुत रूपमा परिवर्तन हुँदैछन्, उदाहरणका लागि अर्को रिलीज, डिसेम्बरमा अपेक्षित हुनेमा सुधार गरिएको स्थापनाकर्ता सामेल हुनेछ। थप, एल्ग विकासकर्ता समुदाय सहयोग गर्न इच्छुक धेरै ipople संग जीवन्त छ। त्यसोभए, यदि तपाईले आफ्ना सदस्यहरूलाई उच्च स्तरको गोपनीयता नियन्त्रण प्रस्ताव गर्न चाहानुहुन्छ, वा कुनै कम्पनीले तपाईको सबै डेटा प्रबन्ध गर्ने बारेमा चिन्तित महसुस गर्न थाल्छ भने, हामी तपाईलाई एल्ग.org मा फेरि रोक्नको लागि स्वागत गर्दछौं।
यस परियोजनाको लागि शुभकामना!